नैतिकता भनेको त्यो बन्देज हो, जसले लोकलज्जामा बस्न सिकाउँछ र कसैले नैतिकहीन भन्छ कि भन्ने सदैव हेक्का राख्न लगाउँछ । त्यसैले त बेलायतमा संविधान नभए पनि नैतिकताले पद्धति चलेको छ । हामी संविधान संविधान भनिरहेका छौं, नैतिक धरातलबाट च्यूत भएको थाहै पाउँदैनौं, नैतिकता नभएपछि केको शरम, यस्तालाई संविधान भनेको कागजको खोस्टो मात्र हो ।
मूलको पानी र कूलको सन्तान सधैं स्वच्छ र इमान्दार हुन्छ भनिन्छ । मूल प्रदुषित भएपछि, अभिभावक नैतिकहीन बनेपछि न पानी पिउन लायक रहन्छ, न सन्तान सद्विचारमा रहन्छन् । यस्तै देखिन्छ हाम्रो मुलुकको बन्दोवस्ती । राजनीतिमा नैतिकहीनताको फोहरी नाली नै पसेको छ । त्यसैले त नेताहरु, शासक प्रशासकहरु नाक थुन्नुपर्ने गरी गनाइरहेका छन् ।
मूल भनेको बिधिको शासन हो, कूल भनेको राजनीतिक दलहरु हुन् । संविधान बन्यो, विधि बस्न सकेन । ठूला नेताहरु एकापसमा मिल्छन्, त्यसैलाई संविधान, विधि भन्ने गरिएको छ । योभन्दा लाजमर्दो अरु के हुन्छ ? शासनविधि अस्तव्यस्त भइरहेको छ । कूल अर्थात राजनीतिक दलहरु हुन्, उनीहरु आफै अव्यवस्थाका प्रेरक उदाहरण बनेका छन् । कसरी मुलुकमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ ?
अनियमितता, गैरजिम्मेवारी, कर्तव्यहीनता र भ्रष्टाचार हुने भनेको जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहीबाट हो । अहिले मुलुकमा पन्पिएको भ्रष्टाचार र राजनीतिको माफियाकरणको तीतो यथार्थ भनेको राजनीतिको स्रोत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारको स्रोत शक्ति हो । अव त चुनावमा खुलेआम डन र धनको प्रयोग भइरहेको छ । डन र धनको प्रयोगबाट चुनाव भएपछि चुनावबाट सुशासन जन्मेला कि कूशासन ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हरेक ठूला पार्टीका बडे बडे नेताहरुसमेत भ्रष्टाचारमा गनाएका छन् । नक्कली सम्पत्ति बिबरण बुझाउँछन् र सक्कली भ्रष्टाचारी, दुराचारी बन्छन्, यस्ता नेताहरुले संविधान कार्यान्वयन भनेर कुर्लिरहेका छन्, नेता नैतिकवान भए संविधान त्यसै कार्यान्वयन हुन्छ । जनताको मन जित्नै सकेनन् संविधान र नेताहरुले, संविधान कार्यान्वयन भए के नभए के ? आखिर हुने ठूला दलहरुले भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने न हुन् ?
भ्रष्टाचार पन्पिएको सही हो । अहिले त हदैसम्मको भ्रष्टाचार र माफियाकरण भइरहेको छ । लोकशासनमा जति भ्रष्टाचार कुनै पनि शासनमा भएका थिएन । भ्रष्टाचार भयो भन्ने हल्ला चल्छ, अदालतमा मुद्दा पनि पुग्छ र भ्रष्टाचारीले सहजै उन्मुक्ति पाउँछन् । यो पद्धतिको दोष होइन, नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो । जबसम्म जनप्रतिनिधि, शासनाधिकारीहरुमा नैतिकताको बोध हुन्न, तवसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि पवित्र बन्न सक्दैन । भ्रष्टहरुले बिटुल्याउनेछन् ।
अव त अति भयो । भ्रष्टाचारको मुद्दा जनतहबाट ज्वारभाटा बनेर उठ्नुपर्ने हो । जनता कतिसम्म राजनीतिकरण भइसके भने, एकथरिको कुरा अर्काथरिले पूर्वाग्रहमात्र ठान्न थालेका छन् । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीसमेत राजनीतिक कित्ता कित्तामा काटिएका छन् । स्वच्छ, स्वतन्त्र समाजको संरचना भत्किएको छ । भत्किएको समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्दैन । सार्वभौम जनता मात्र चुनावी भोटमा सिमित हुनपुगेका छन् । भोटमा अन्तरनिहित शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुगेकाले जनशक्ति कमजोर र राजनीतिक नेताहरुको शक्ति बढेको छ । नेताहरुलाई भ्रष्ट, अनैतिक, अपराधी र माफियाहरुको प्रभावले थिच्ने हुँदा सुशासन स्यालको सिङ झैं गायव हुनपुगेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा अपराधिकरण दिनदिनै बढेर गएको छ । स्वाधीनता यिनकै मुठ्ठीको माखो बन्न पुगिसक्यो । तीतो यथार्थ, लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र, छुट्याउनै मुस्किल छ ।
कसरी बचाउने यो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचार र आवश्यकताभन्दा ज्यादा राजनीतिकरणको रोगबाट लोकतन्त्रलाई ? क्यान्सरभन्दा भयानक छ– भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारले नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमी, नागरिक समाजको समेत आचरण बिगारिसक्यो, यसको शुद्धिकरण हुनसकेन भने सुशासन खाइसक्यो, देश टोक्नसक्छ । देश बोक्ने शक्ति क्षीण पारिदिएपछि देश असफल हुन्छ । भ्रष्टाचारको रोगले नेपालको राष्ट्रियतालाई भित्रबाहिर दुबैतिर चपाइरहेको छ ।
राजतन्त्र समाप्त भए नयाँ नेपाल बन्छ भनियो । राजतन्त्र र हिन्दुधर्म फालेपछि त नैतिकताको खडेरी नै परेको छ । नयाँ होइन, भएको नेपाल पनि सिद्धिन्छ कि भन्ने भय पो पस्यो मनमनमा । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु नै लोकतन्त्र हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव संघारमा आइसक्यो । कुनै नेता अथवा पार्टीले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेनन् । मात्र विकासको डंका पिटेका छन्, गर्न नसकिने आश्वास बाँडिरहेका छन् । जनताको आँखामा भ्रम छरेर जनमत लिने दाउपेच लगाइरहेका छन् । हुने नहुने कुरा बोलेर जनतालाई भ्रमित पार्नुभन्दा मात्र नैतिक बन्धनमा बस्छौं, समानता र योग्यताको कदर हुने अवस्थाको सिर्जना गर्छौं, जनअपेक्षा संवोधन गर्ने प्रयास गर्छौं भनेर भोट मागेको भए नयाँ नेपालको जग बस्ने नैतिक धरातल तैयार हुन्थ्यो कि ?